Tandrevaka nahafaty an’i Alain Boutre Tsy hamelanay ireo mpitsabo, hoy ireo mpanakanto
Nanao fanambarana ny sabotsy teo ny solontenan’ireo mpanakanto, nahitana an’i Mamy Gotso, notronin’i Tsiliva,
RADO RAMPARAOELINA Tokony hatao mangaraharaha ny fitantanana ny CLD
Ny 80 %-n’ny vola azo avy amin’ny CLD ho an’ny distrikan’Antananarivo Atsimondrano dia fantatra fa haompana amin’ny resaka fanabeazana avokoa hahafahana mampihena ny tahan’ireo ankizy tsy tafiditra an-tsekoly.
Fihainoana ny hetahetam-bahoaka Hatsangana ny birao isam-bohitra any Arivonimamo
Hanangana birao isam-bohitra ny ben’ny tanànan’Arivonimamo mba handraisana ny hetahetan’ireo vahoaka eny anivon’ny fokontany.
Raharaha Îles Eparses Tena ho sarotra ny raharaha
Nambaran’ny gazety Frantsay Le Monde fa nampitombo ny fanampiany an’i Madagasikara i Lafrantsa, saingy tsy hamerina velively ny Iles Eparses.
Am-perinasa ny HCJ Hisy minisitra teo aloha higadra…
Notanterahina omaly 20 febroary ny lanonana ara-pitsarana fianianan’ireo mpikambana ao anatin’ny Fitsarana Avo (HCJ),
Tetikasan’ny filoham-pirenena Mila fanadihadiana lalina ihany…
Fotoana izao ho an’ny mpanatanteraka handinihana lalina ireo tetikasa izay hotanterahina eto amintsika.
Antananarivo Atsimondrano Natokana ho an’ny fanabeazana ny 70%-n’ny CLD
Natokan’ny solombavambahoakan’Atsimondrano mirahalahy, Alain Ratsimbazafy sy Andry Ratsivahiny, ho an’ny sehatry ny fanabeazana ny 70%-n’ny CLD
Asa na fanahy iniana fa tsy nahatontosa ny andraikiny ny solombavambahoaka. Zavatra hafa tanteraka no ataony, mba hahatsara azy eo imason’ny mpifidy na hitangosana tombontsoa manokana : tsy anjarany ny manamboatra ny lalana, ny manome fitaovana ny sekoly, ny mamorona paompin-drano na ny manome baolina hanaovana kitra, na bodofotsy. Ireny asan’ny mpanao ronono an-tavy ireny dia tsy misy ifandraisany velively amin’ny asan’ny solombavambahoaka. Ambonin’izay, tsy vola manokan’ny olom-boafidy akory no ampiasaina fa vola nomena hampiasain’ny antenimieram-pirenena, saingy izy tsy hilaza izany na oviana na oviana. Misy tomban’ny asan’ny antenimiera farany teo, mbola mijanona ho tsiambaratelo milaza izao zavatra izao : ny 2014 ka hatramin’ny 2018, ny depiote dia nifidy lalàna 271 ( tsy eo am-pelatanana ny lisitra manontolo, nefa irina ho fantatra ny isanjaton’ny tolo-dalàna nipoitra avy amin’ny solombavambahoaka). Ny faharetan’ny asa niantsoana fivoriambe dia ora 262 tamin’ny 2014, ora 167 tamin’ny 2015, ora 120 tamin’ny 2016, ora 124 tamin’ny 2017 ary ora 51 monja tamin’ny 2018 ! Raha atambatra, ora 344 izany no hoe natokana ho an’ny asa momba ny lalàna ary ora 166 ho an’ny fanaraha-maso ny asan’ny governemanta tamin’ny alalan’ny fanontaniana valiana eo no ho eo matetika, tsy dia hita loatra izay ilana azy. Tsy noraharahain’ny solombavambahoaka mihitsy kosa ny momba ny tomban’ny politika ho an’ny mponina. Hita ao daholo izao rehetra izao, hoy ny Sefafi, ao ny ondrankondrafana, ao ny tampohin-karena, ao ny mpanararao-paty; misy mpamono olona voaaro ho tsy maty manota satria solombavambahoaka, misy mpandraharaha mpanao kolikoly ; hita ao mihitsy koa ny olona matotra sy mahomby, saingy ho fantatry ny mpifidy efa voafitaka lava ve izy ireny ? Mba hahafahan’ny olom-pirenena mifidy am-pisainana tanteraka, ny SeFaFi dia te hitondra fanazavana ho an’ny olona mikasika ny hevitra fototra ijoroan’ity fifidianana ity.